लोडसेडिङ छैन र पनि किन काटिन्छ बिजुली ? – Waikhari
गृहपृष्ठ Featured लोडसेडिङ छैन र पनि किन काटिन्छ बिजुली ?
लोडसेडिङ छैन र पनि किन काटिन्छ बिजुली ?
विद्युत प्राधिकरण आक्रामक, १४ हजार ट्रान्सर्फमर थपिँदै
२६ पौष, काठमाडौं । लोडसेडिङ हटिसकेको भएता पनि आजभोलि विभिन्न स्थानमा बारम्बार बिजुली काटिने समस्या बढेको छ । कतिपयले यसलाई ‘लोडसेडिङ’ भन्दै गुनासो गर्ने गरेका छन् । प्राधिकरणले भने हिउँदमा लोड बढ्दा मुख्यगरी वितरणलाइनमा आउने समस्याका कारण यस्तो बिजुली काटिने समस्या आउने गरेको बताउने गरेको छ ।